သူများတွေ ဘလောဂ်လေး ဖန်တီး ပြီး ပြောချင်တာတွေ ၊လုပ်ချင်တာ တွေ၊ ရင်ဖွင့်ချင်တာတွေကို လွတ် လွတ် လပ်လပ် ရေးနေတာတွေ တွေ့တော့ မဒီတို့လည်း တစ်ခု လောက် ဖန်တီးပြီး ရင်ဖွင့်ချင်တာ တွေကို စာသားလေး တွေအဖြစ် ပြောင်းပြီး ခံစားကြည့် မလားလို့...ပြီးတော့ ဖြတ်သန်း လာခဲ့ရတဲ့ ဘ၀အတွေကြုံလေးတွေကိုလည်း တစ်ဆင့်ပြန်ပြီး မျှဝေကြည့်မလား လို့ပါ...
To get Zawgyi-one
Zawgyi font/ Keybord map
နှစ်သက်ရာတစ်ခုကို ရွေးပါ...စိတ္တသုခဗုဒ္ဓကွန်ယက်ဓမ္မဒါနဓမ္မဒေါင်းလုပ်ဒါe-ဓမ္မမြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာသမ္ဗောဓိမေတ္တာကွန်ယက်buddhism.aboutဗုဒ္ဓပိယ(ကိုရိးယား)ဓမ္မနက်(ကိုရီးယား))ကရုဏာ(ကိုရီးယား)အွန်လိုင်းစွယ်စုံဝိခိပိဒိယားဘာသာပြန်ဝက်ဘ်ပေ့ခ်ျhackerstoeicbreaking-news-englishကိုရီးယားဘာသာစကားဗွီအိုအေအင်္ဂလိပ်ဘီဘီစီအင်္ဂလိပ်စီအန်နန်လွတ်လပ်သည့်အာရှအသံဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံမိုးမခမဇ္ဈိမ ဟစ်တိုင်ဧရာဝတီယနေ့မြန်မာခေတ်ပြိုင်မြန်မာmp3ညကဗျာshwedreamshwedream2မြန်မာစိဒီ၊ ဗွီစီဒီ မြန်မာ့ကမ္ဘာမြန်မာသီချင်းများ မင်းသီလမြန်မာတို့ရဲ့အင်တာနက်flashbandUseful Software
နှစ်သက်ရာဘလောဂ့်ကိုသွားပါ... ဘုန်းဘုန်းဦးဝိစိတ္တ သီဟိုဠ်-မြန်မာရဟန်းတော်များ ကိုနစ်နေမန်း ပုထုဇင် ကိုစစ်အိမ် ကိုမျက်လုံး စုစုကဗျာ ကိုပွက် ကိုဖိုးဇင်မောင်သန့်ဇင် စေတန်ဂေါ့ဒ် ကိုဝေယံလင်းငဖုန်းငယ်ကိုကျော်ဇေယျ ကိုရဲမွန် ကိုရန်အောင် ကိုဘလာဂေါက် ကိုညီညီ (သံလွင်) ကိုစိုးဇေယျ ကိုညီလင်းဆက် ကိုချမ်းမြစိုး ကိုမျိုးချစ်မလေးမ လင်းလက်ကြယ်စင်နိုင်နိုင်းစနေ မသဒ္ဓါ မမယ်လိုဒီမောင် mm blogger helpesk မနေနေနိုင် ပန်ဒိုရာ မဂျစ်တူး မသဉ္ဇာ
but it can softena heart
Justatune...
but it can delightasoul
as deep as sorrow.
Justahelp...
but it can brightenalife
as dard as pitch.
but it can cheer upamind
but it can enlivenasituation
So... why not haveago
Posted by maymadi at 10:49 PM0comments Links to this post
My Best Present for You.....
(၁)ခရီးအတူသွား ကောင်မလေးတစ်ယောက်က အခုလို့ မေးခဲ့တယ်။"လူတစ်ယောက်က အခြားလူတစ်ယောက်ကို ပေးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်က ဘာလဲ"
ဒီမေးခွန်းကို သဘောကျလို့ သိတဲ့ လူအချို့ကိုလည်း မေးခဲ့ဖူးတယ်။ အဖြေတွေအများကြီးထဲက တစ်ချို့အဖြေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေတယ်။ ဥပမာ "သစ္စာ၊ ချီးကျူးစကား၊ ဂတိ၊ အကြင်နာ၊ ဗဟုသုတ၊ လေးစားမှု၊ ခွင့်လွတ်မှု၊ အချစ်၊ ဂရုစိုက်မှု.... " စတာတွေဖြစ်တယ်။ အဖြေတွေထဲက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး ဖြေခဲ့တဲ့ "အချိန်" ဆိုတဲ့အဖြေကို အခုထက်ထိ အမှတ်ရနေမိတယ်။
ချစ်သူနဲ့ကွဲစ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို စိတ်ပြေအောင် ကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက် အပြင်ခေါ်ထုတ်ပြီး လည်ပတ်စားသောက်ကြတယ်။ တစ်ပတ်နေပြီးနောက် သူငယ်ချင်းတွေထဲက တစ်ယောက်က သူ့ကို "နင်စိတ်ပြေအောင် လည်ပတ်စားသောက်ခဲ့တဲ့ billတွေအားလုံး အဲဒီလူကို ပို့ပေးလိုက်၊ ပိုက်ဆံကို သူရှင်းပါစေ"လို့ စနောက်လိုက်တယ်။
"ဟင်း....သူလျော်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး.. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငါ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးအချိန်၊ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အချိန်တွေကိုတောင် သူ့ကိုပေးခဲ့တာပဲ။ သူလျော်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး" လို့ သူက ပြန်ဖြေရှာတယ်။
(၂)နေ့တိုင်း အချိန်တွေကို အလုပ်မှာပဲ မြုပ်နှံထားပြီး အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အရွယ်လွန်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို သူ့အိမ်က စိတ်ပူစပြုလာတယ်။ သူ့အတွက် သင့်တော်မယ့် မိန်းကလေးကို လိုက်ရှာ၊ လိုက်စပ်ပေးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေကြတယ်။ "ဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးကို ကြိုက်လဲ၊ ကိုယ်ကြိုက်တာ တစ်ခုခုကို ပြောမှ လူတွေက နင့်အတွက် ရှာပေးရ အဆင်ပြေမှာပေါ့" လို့ သူ့ကို ကျွန်မမေးတော့..."သူ့အတွက် ငါ့အချိန်တွေကိုပေးနိုင်မယ့် မိန်းကလေးကိုပဲ ငါလိုချင်တယ်" လို့ သူက ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။
(၃)အချစ်ကြောင့် စိတ်ရောကိုယ်ပါ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က နှစ်တွေကြာခဲ့ပေမယ့် မပျော်ရွှင်တဲ့ စိတ်ပြတင်းပေါက်ကို မဖွင့်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အချစ်သစ် မရှာနိုင်ခဲ့ဘူး။ လူတွေက သူ့ကိုထားသွားခဲ့သူကို မမေ့နိုင်လို့၊ စောင့်နေသေးတယ်လို့ ထင်နေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူ သူ့ကိုပြန်ဆက်ဖို့ ထပ်ကြိုးစားချိန်မှာ သူငြင်းပယ်ခဲ့တယ်။
"သူ့ကို ကျွန်မ မေ့မရလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မနှမြောတာက ဟိုးအရင်သူနဲ့အတူ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အချိန်တွေကိုပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုအချိန်မျိုး ကျွန်မတို့အတွက် ထပ်ရှိလာနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး"
(၄)"အဆုံးမဲ့ အချိန်နယ်ပယ်တွင်းမှာ စောတယ်၊ နောက်ကျတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ အချိန်မီ ရောက်လာတာပဲရှိတယ်"
မှန်တဲ့အချိန်မှာတွေ့တဲ့ အချစ်ရဲ့ရုပ်ပုံကမှ လှပသတဲ့။ (right time, right person)မှန်တဲ့အချိန်မှာ မှားတဲ့အချစ်နဲ့ တွေ့ရင် ခံစားရတယ်။ (right time, wrong person)မှားတဲ့အချိန်မှာ မှန်တဲ့အချစ်နဲ့တွေ့ရင် ၀မ်းနည်းရတယ်။ (wrong time, right person)
သွားအတူ၊ လာအတူ၊ စားအတူ၊ အတူဆွေးနွေးတယ်၊ အတူဆိုညည်းတယ်၊ အတူကဗျာစပ်ကြတယ်၊ အတူကာရံတွေညှိကြတယ်... အတူ..... အတူ.... တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ "အပျော်"ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ တကယ်လို့ ကျွန်မကို "အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်က ဘာလဲလို့" မေးခဲ့ရင် "အချိန်" လို့ပဲ ကျွန်မဖြေမိမှာပါ။
ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်နေ၊ ခံစားနေပါစေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ လေးစားမြတ်နိုးနေပါစေ... အဲဒီအချစ်၊ မြတ်နိုးမှုတွေက ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ အနားမှာနေခွင့်ရတဲ့ "အချိန်" နဲ့ မနှိုင်းသာပါဘူး။
Posted by maymadi at 5:58 PM0comments Links to this post
A B C of friendship
(A)cepts you as "you"
(Z)aps you back to reality ...
maymadi. . .
Posted by maymadi at 3:26 PM0comments Links to this post
အချစ် အတွက် ထာဝစဉ် ရှိပေးမယ့်သူ
Posted by maymadi at 4:30 PM0comments Links to this post
Posted by maymadi at 4:15 PM0comments Links to this post
Posted by maymadi at 8:50 PM0comments Links to this post
Posted by maymadi at 4:30 AM0comments Links to this post
Royal Love Request
Posted by maymadi at 12:10 PM0comments Links to this post
Posted by maymadi at 5:59 PM0comments Links to this post
Posted by maymadi at 10:43 AM0comments Links to this post